Ọpụpụ 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ahụhụ nke asatọ: igurube (1-20)
Ahụhụ nke itoolu: oké ọchịchịrị (21-29)
10 Jehova wee gwa Mosis, sị: “Gakwuru Fero n’ihi na m kwere ka obi ya na obi ndị na-ejere ya ozi kpọchie,+ ka m wee mee ihe àmà m ndị a n’ihu ya,+ 2 ka i wee kọọrọ ụmụ gị na ụmụ ụmụ gị otú m si mesie ndị Ijipt ike nakwa ihe àmà ndị m mere n’etiti ha.+ Unu ga-amatakwa na m bụ Jehova.” 3 Mosis na Erọn wee gakwuru Fero, sị ya: “Jehova bụ́ Chineke ndị Hibru kwuru, sị, ‘Olee mgbe ị ga-akwụsị inupụrụ m isi?*+ Hapụ ndị m ka ha gaa fee m.* 4 N’ihi na ọ bụrụ na ị ka na-ajụ ịhapụ ndị m, m ga-eme ka igurube bịa n’ala gị echi. 5 Ha ga-ekpuchi elu ala, a gaghịkwa enwe ike ịhụ ala anya. Ha ga-erichapụ ihe akụ́ mmiri ígwé mebifọọrọ unu, ha ga-erichapụkwa osisi unu niile na-etopụta n’ubi.+ 6 Ha ga-eju n’ụlọ gị, n’ụlọ ndị niile na-ejere gị ozi, nakwa n’ụlọ ndị Ijipt niile ruo otú nna gị hà na nna nna gị hà na-ahụtụbeghị ya malite n’ụbọchị ha dịwara ndụ n’ala a ruo taa.’”+ O wee tụgharịa, hapụ Fero pụọ. 7 Ndị na-ejere Fero ozi gwaziri Fero, sị: “Ruo ole mgbe ka nwoke a ga na-emesi anyị ike?* Hapụ ndị a ka ha gaa fee Jehova bụ́ Chineke ha.* Ọ̀ bụ na ị matabeghị na Ijipt alaala n’iyi?” 8 E wee kpọghachi Mosis na Erọn n’ihu Fero, ya asị ha: “Gaanụ fee Jehova bụ́ Chineke unu.* Ma, oleedị ndị ga-aga?” 9 Mosis sịrị: “Anyị na ụmụntakịrị anyị, ndị agadi anyị, ụmụ anyị ndị nwoke, ụmụ anyị ndị nwaanyị, atụrụ anyị, na ehi anyị ga-eso aga,+ n’ihi na e nwere ememme anyị ga-emere Jehova.”+ 10 Ọ sịrị ha: “M nwaa anwaa hapụ unu ka unu na ụmụntakịrị unu gawa, maranụ na Jehova nọnyeere unu n’eziokwu!+ O doro anya na unu bu ihe ọjọọ n’obi. 11 Mba! Naanị ụmụ nwoke unu nwere ike ịga fee Jehova,* n’ihi na ọ bụ ihe unu rịọrọ.” E wee chụpụ ha n’ihu Fero. 12 Jehova gwaziri Mosis, sị: “Setịa aka gị n’ala Ijipt ka igurube bịa, ka ha bịa n’ala Ijipt richapụ ahịhịa ndụ niile dị na ya, ya bụ, ihe niile akụ́ mmiri ígwé mebifọrọ.” 13 Ozugbo ahụ, Mosis setịrị mkpara ya n’ala Ijipt, Jehova wee mee ka ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ fee n’ala ahụ n’ụbọchị ahụ niile nakwa n’abalị ahụ niile. Mgbe chi bọrọ, ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ butere igurube. 14 Igurube ndị ahụ febatara n’Ijipt niile ma ju ebe niile n’ala Ijipt.+ Ha karịrị akarị.+ E nwetụbeghị mgbe igurube juru eju otú a, e nweghịkwa mgbe a ga-enwe ya ọtụtụ otú a ọzọ. 15 Ha kpuchiri ala ahụ niile ma mee ka ala ahụ gbaa ọchịchịrị. Ha richapụrụ ahịhịa ndụ niile dị n’ala ahụ na mkpụrụ niile dị n’osisi ndị akụ́ mmiri ígwé na-emebighị. E nweghị ihe ọ bụla na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ fọrọ n’elu osisi ma ọ bụ n’ahịhịa dị n’ọhịa n’Ijipt niile. 16 Fero wee kpọọ Mosis na Erọn ọsọ ọsọ, sị: “Emehiela m Jehova bụ́ Chineke unu, mehiekwa unu. 17 Ugbu a, biko, gbagharanụ m mmehie m naanị otu ugboro a ma rịọsierenụ m Jehova bụ́ Chineke unu arịrịọ ike ka ọ kwụsịrị m nsogbu ọjọọ a.” 18 O* wee hapụ Fero pụọ gaa rịọ Jehova arịrịọ.+ 19 Jehova meziri ka e nwee oké ifufe nke si n’ebe ọdịda anyanwụ. O wee buru igurube ndị ahụ buba n’Oké Osimiri Uhie. Otu mkpụrụ igurube afọghị n’ala Ijipt niile. 20 Ma, Jehova kwere ka obi Fero kpọchie,+ ọ hapụghịkwa ndị Izrel ka ha gawa. 21 Jehova gwaziri Mosis, sị: “Welie aka gị chee n’eluigwe, ka oké ọchịchịrị gbaa n’Ijipt.” 22 Mosis weliri aka ya ozugbo chee n’eluigwe, oké ọchịchịrị wee gbaa n’Ijipt niile ruo ụbọchị atọ.+ 23 Ha ahụghị ibe ha anya, e nweghịkwa otu n’ime ha biliri n’ebe ọ nọ ruo ụbọchị atọ. Ma ìhè dị n’ebe ndị Izrel niile bi.+ 24 Fero kpọziri Mosis, sị: “Gaanụ fee Jehova.*+ Unu ga-ahapụ naanị atụrụ unu na ehi unu. Ụmụntakịrị unu nwekwara ike iso unu gaa.” 25 Ma Mosis sịrị: “Ị ga-enyekwa anyị* ihe ndị anyị ga-eji chụọ àjà a na-esu ọkụ nakwa àjà ndị ọzọ. Anyị ga-eji ha chụọrọ Jehova bụ́ Chineke anyị àjà.+ 26 Anyị ga-achịrịkwa anụ ụlọ anyị gaa. Anyị agaghị ahapụ anụmanụ ọ bụla, n’ihi na anyị ga-eji ụfọdụ n’ime ha fee Jehova bụ́ Chineke anyị. Anyị amaghịkwa ihe anyị ga-eji achụrụ Jehova àjà ruo mgbe anyị ruru n’ebe ahụ.” 27 Jehova wee kwe ka obi Fero kpọchie, o kweghịkwa ahapụ ha ka ha gawa.+ 28 Fero sịrị ya: “Si n’ihu m pụọ! Anwakwala anwa bịa n’ihu m ọzọ, n’ihi na n’ụbọchị ị hụrụ ihu m, ị ga-anwụ.” 29 Mosis wee sị: “Agaghị m anwa anwa bịa n’ihu gị ọzọ, otú i kwuru.”
^ Ma ọ bụ “ga-akwụsị ịjụ ido onwe gị n’okpuru m?”
^ Na Hibru, “jeere m ozi.”
^ Na Hibru, “ga-abụrụ anyị ọnyà?”
^ Na Hibru, “jeere Jehova bụ́ Chineke ha ozi.”
^ Na Hibru, “jeere Jehova bụ́ Chineke unu ozi.”
^ Na Hibru, “jeere Jehova ozi.”
^ Ọ ga-abụ Mosis.
^ Ma ọ bụ “ga-ekwe ka anyị were.”